စာလင့်ခ် ထည့်၊ ပုံ ဘောင်ထည့်နဲ့ ဟိုကလိ ဒီကလိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » စာလင့်ခ် ထည့်၊ ပုံ ဘောင်ထည့်နဲ့ ဟိုကလိ ဒီကလိ
စာလင့်ခ် ထည့်၊ ပုံ ဘောင်ထည့်နဲ့ ဟိုကလိ ဒီကလိ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jan 14, 2013 in Computers & Technology | 22 comments
ယခုပို့စ်မှာ ကျွန်ုပ်၏ စာနွေးခြင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း …….။
စာ လင့်ခ် ထည့်
စာကို လင့်ခ် ထည့်တာများ လွယ်လွယ်လေး ….။
လင့်ခ် ထည့်ချင်တဲ့ စာကို Select မှတ်၊ ပြီးရင် လင့်ခ် icon လေးကို နှိပ်ပြီး ထည့်လိုက်ရုံပေါ့ ….။
သိပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ….. ကလိမိရာ ဖြစ်လို့ ဒီထဲ ထည့်လိုက်တယ်ဗျာ …..။
လင့်ခ် ထည့်ချင်တဲ့ စာကို အရင်ဆုံး Select မှတ်၊ ပြီးရင် လင့်ခ် ပုံစံလေးကို နှိပ်
ဒီလိုလေး ပေါ်လာတဲ့အခါ .. အပေါ်က http:// ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့၊ ညွှန်းချင်တဲ့ လင့်ခ်ကို ထည့်ပါ။ အောက်က Box လေးကို ခေါက်ခြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ လင့်ခ်က နောက် Tab တစ်ခုမှာ ပွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ နမူနာပုံစံ ပေါ့ဗျာ
အကယ်၍များ ကိုယ်ထည့်မယ့် ပို့စ်ရဲ့ လင့်ခ်ကို ရှာချင်ရင်တော့ အောက်မြှားပြထားတဲ့ နေရာလေးကို နှိပ်၊ ပြီးရင် Search ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ကိုယ် လင့်ခ် ထည့်မယ့် ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို ရိုက်ပြီး တိုက်ရိုက် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ပြီဆို ကလစ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ပုံ အကြောင်း ပြောမယ် ဆိုတော့ ….
ကိုဂီ ရေးထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ခု ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ WP Version ရဲ့ ပိုမို မြန်ဆန်တဲ့ ပုံထည့်တဲ့ နည်းစနစ်လေးပေါ့ ….။
ဒါကို ကိုဂီ က နေပြီး “ရွာထဲမှာ ပုံတွေ တင်ဖို့ အတွက်” ဆိုကာ ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်ထားပါတယ်။ ပုံထည့်မယ်ဆို ဒါလေးကို ညွှန်းဆိုပါတယ်။
ကျနော် အခု ပြောမှာကတော့ အောက်က Caption ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းချက် စာတွေ မပါတဲ့ ပုံတွေ အတွက်ပါပဲ။
ဒီပုံတွေက ဘောင်ကွပ်ပြီးသား ဆိုရင် သိပ်မဟုတ်လှပေမယ့် ….။
ဘောင် မကွပ်ရသေးတဲ့ ပုံတွေကို ဒီထဲမှာပဲ ဘောင်ကွပ်ချင်တယ် ဆိုပါက ဟောဒီလိုလေးသာ လုပ်လိုက်ပါ ….။
ပုံက ဘောင်လေးတွေနဲ့ ပိုပြီးများ ကြည့်ကောင်း သွားလေမလားပဲ ….။
MG မှာ ပုံတင်မယ် ဆိုရင် ပုံရဲ့ အရွယ်အစားဟာ 600px x 400px ဟာ အနေတော်ပါပဲ။
Save လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း နံပါတ် (၈) ဟာ အနေတော်ပါတဲ့။
ပုံလေးကို Upload တင်ပြီးလို့ ပေါ်လာရင် ဘောင်လေး ထည့်ဖို့အတွက် ပုံပေါ်ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်က ဟာလေးကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီအခါ ဒီလိုလေး ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဟိုးး အပေါ်နားက Advanced Settings ဆိုတာလေးကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီနေရာကို ရောက်ရင် Border ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ဘောင်အတွက် နံပါတ်ကလေး ရေးပေးပါ။ ဘောင် ထူထူ ထားချင်ရင် နံပါတ် ကြီးကြီးရေးပေါ့ ခင်ဗျာ။ ရေးပြီးရင် အဲ့ဒီထဲက နေရာလွတ်လေးမှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီအခါ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ ဘောင်အနေအထားကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ပို့စ်တင်တဲ့ ထဲမှာ မြင်ရမယ့် ပုံစံလေးပေါ့။
Youtube Video တွေထည့်
ဘဂျီးရဲ့ MandalayTube က ဗီဒီယိုကုတ်တွေကတော့ ကျုပ်တို့ ထည့်လို့ အဆင်မပြေဘူး။
ဒီတော့ Video ထည့်မယ်ဆို ကျုပ်ကတော့ Youtube က ဗီဒီယိုတွေပဲ ထည့်တတ်တယ်။
ဒီလို ထည့်ဖို့ဆို ဒီလိုလေးတွေ လုပ်လိုက်တာပဲ ……။
ဒီစာဒွေဂ နောက်မှ ပြန်ထည့်ဒါ …… အဟီးးးး
အစကတော့ အောက်က ပုံတွေထဲကအတိုင်း ရမ်းတုတ်ပြီး ထည့်လိုက်တာ …. ပေါ်ဘူးရယ် …
ဒါနဲ့ …. ခုလိုလေး ထည့်ကြည့်တော့ ပေါ်တယ်ဂျ …..။
သူ့ဟာက ဘာမှ မဟုတ်ဘူးးး Text လည်း ပြောင်းစရာ မလိုတော့ဘူး …။
Visual ထဲမှာပဲ Youtube Video ဖွင့်တဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့ Address ကိုပဲ ဒီအတိုင်း ထည့်လိုက်ရုံလေးပါပဲ ….။
ဥပမာ အားဖြင့် …. (youtube..com/watch?v=h93PJO37xEk) ဆိုပြီး ဒီအတိုင်း ပို့စ်ထဲမှာ ထည့်လိုက်တာနဲ့
Video ပေါ်ပါကြောင်း …. Update လုပ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ ………။
Youtube ကို အရင်သွား၊ ဗီဒီယိုလေး ဖွင့်၊ Right Click နှိပ်၊ ပေါ်လာတဲ့ ထဲက ဒါလေးကို နှိပ်။
ပို့စ် တင်တဲ့ထဲက Text ဆိုတာလေးကို နှိပ်
ပြီးရင် Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Visual ကို ပြန်နှိပ်၊ ဒီအခါ ဒါမျိုးလေး မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Video ရဲ့ ဆိုက်ကို ချုံ့ချင် ချဲ့ချင်ရင်တော့ အဲ့ဒီပေါ် ကလစ်နှိပ်၊ ထောင့်လေးကနေပြီး မြှားကလေးကို နှိပ်ဆွဲရင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Align ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်း စာတွေကို Align ချိန်တဲ့အတိုင်း အပေါ်က Align Icon လေးတွေနဲ့ ချိန်နိုင်ပါတယ်။
Youtube Video နမူနာ ထည့်ကြည့်တာ …
( ဥုံ ….. ဖွ …… ပေါ်စေဒဒီးးးးး )
ဆရာသမားချင့် … ကွန်မန့်ထဲမှာ ပုံထည့်ချင်ရင် ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ သဂျီးကလွဲလို့ တခြားသူတွေထည့်တာလဲမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ သဂျီးလို ဘီဒို အာဏာရှိတဲ့သူတွေပဲ လုပ်လို့ရတာလား။
ပြီးတော့ သူများတွေကွန်မန့်ထဲမှာတွေ့နေကျ လျှာထွက်နေတဲ့ စမိုင်လီတို့၊ သွားကျိုးနေတဲ့ စမိုင်လီအမဲရောင်တို့ကို ရော ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။
အက်စကီး စမိုင်လီပဲလုပ်ရတာ ပျင်းစရာ။ :-)
မမကြော် ခည ….
စမိုင်လီ ပုံတွေကို အောက်က လင့်မှာ သွားကြည့်လိုက်ဘာ ခည ….
ကွန်မန့်ထဲ ပုံထည့်ဒါဂဒေါ့ Admin, Editor တွေဘဲ ထည့်လို့ ရဘာဒယ် ခည ….
လုပ်တတ်ဘူးကွာ …… ပျင်းတယ်
ပညာတွေက သင်လို့ မဆုံးနိုင်တော့ ဘူး
ကဲ ကဲ ကျုပ်ထည့် ချင်ရင် မောင်ရင့် ကိုပဲ အပူကပ်တော့ မယ်
ကျုပ်တို့ က စာတောင်မနဲ ရိုက်ရတာ
လောလောဆယ်တော့ကူးထားဦးမယ် ။နောင်အတွက်……….
ဟေ့လူ ဥဆာမိ …
ကျုပ်က အိုက်ဂျရင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေမှာ …
စာတောင် မနည်း ရိုက်ရလို့ …
ဖုန်းနဲ့ ချက်တာများ မြန်မှမြန် ….
ကျုပ်ဆို တစ်လုံးစီ မနည်း ရိုက်နေရတယ် …
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် တားတား တို့လဲ comment ထဲမှာပုံထည့်ဂျင်ဒယ် ။
ပုံနဲ့ မန့် ဂျင်တယ် …..ပုံ နဲ့ မန့် ဂျင်တယ်။
အစ ဆွဲထုတ်ပြီး မှ အဆုံး ထိ ထုတ်ပြ ဦးဦး အံဂျာဒုံး
ပုံ နဲ့ မန့် ဂျင် ဒယ်……………… ပုံနဲ့ မန့်ဂျင်တယ်။
နာ့ဆီဂ ကိုးနတ်ရှင်ဆိုဒဲ့ကောင် အသုံးကို မကျဘူး
မတော်တဆ ရေးချင်တာများရှိရင် ပြန်ကြည့်ဖို့
video ထည့်တာလေး try ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဗျို့
အားပေးတွားဒူ အပေါင်းဂို ကျေးကျေးဘာလို့ ..
ကွန်မန့်ထဲကို ပုံထည့်ချင်ရင်ဒေါ့ ..
သဂျီး သမီးကို ယူမှ …
သဂျီး သားကို ယူမှ ….
အားလုံးဘဲ .. ရှဲရှဲ .. သန်းကျူးးး
မိုင်ပွိုင့်ရဲ့အောက် Rank နောက်မှာ ကိုအံဇာ ဘယ်အဆင့်ပါလိမ့်ဗျ
ကျနော်က ခု Bronze ဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါ ပို့စ်ထဲ ဗွီဒီယို ထည့်ရတဲ့ အဆင့် ဟုတ်သေးဘူးထင်ပါထယ်
မဆိုင်လောက် ပါဘူးဗျာ ……..
ပို့စ်ထဲ ဗီဒီယို ထည့်ချင်ရင် …
Youtube ရဲ့ လင့်ခ်လေးကိုသာ ထည့်လိုက် …
ဘယ်အဆင့် မဆို ရလောက်တယ် ထင်ပါတယ်ဗျ …
အိုက်ဒီ ဘရွန့်ဒွေ .. ဆေးဗား ဆိုတာတွေက
ပိုက်ပိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ….
ပေါ်လည်း ပီးဒါဘဲ …
အပျင်းပြေ လက်ကမြင်းနိုင်စေဖို့ မှတ်သားသွားပါတယ်ဗျ
အဆင့် များတယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ..
ဓါးမကြီး ပဲ့ပဲ့ ဆိုသလိုမျိုး နေလောက်တယ် …
ဂျီးသမီးအသက်က ဦးကြောင်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပဲ။ ကြေးမုံဂျီးကတော့ အနော့် ဘွားအေလောက် ရှိပြီ။ :harr:
ဘောင်ကွပ်ဖို့ သင်ပေးတဲ့ ဆြာအံဇာကို ကျေးဇူးပါ.။
အသုံးပြုပုံ ရေးပေး ထားတာ ကျေးဇူးပါ အံစာတုံးရေ
တိုအံဂျီး မိုက်တယ်ဗျာ..။ လူဆိုး နောက်တာ ခရီးက ပြန်လာတာ ဘာလက်ဆောင်ပါလဲ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို အကျိုးရှိတာလေးတွေတင် ပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ..။
မှတ်တော့မှတ်သွားတယ်… ဒါပေမယ့် .. တကယ်တမ်းထည့်မယ်ဆိုရင်တော့..